Abameli bezinkampani ezisiza inkampani yakho | Law & More BV
Njengosomabhizinisi, kuzodingeka ukuthi ubhekane nazo zonke izinhlobo zezinkinga zomthetho. Abameli bethu ezinkampani banombono onguchwepheshe futhi bangakucebisa futhi bakusize ezindabeni ezihlobene nobusomabhizinisi.
NGESIDINGO SOMTHETHO WOMTHETHO WEZIMALI?
BUZA UKUZEZA UKUZEZA NGOMTHETHO
> Ukuxhaswa okwenziwe ngomthetho okwenziwe ngomsila
> Umeluleki wezomthetho
Njengosomabhizinisi, kuzodingeka ukuthi ubhekane nazo zonke izinhlobo zezinkinga zomthetho. Abameli bethu ezinkampani banombono onguchwepheshe futhi bangakucebisa futhi bakusize ezindabeni ezihlobene nobusomabhizinisi. Izihloko ezilandelayo zingabhekwa:
• Ukusungulwa kwebhizinisi elisemthethweni;
• ukusiza ekuphatheni kwezinkampani;
• ukuhlangana okungenzeka nokuthengwa;
• Ukwenza ukukhuthala okusemthethweni;
• Ukuhlelwa kanye nokuhlolwa kwezivumelwano;
Izici zentela ngaphakathi kwenkampani.
Ngokungeziwe ezinsizakalweni zomthetho zebhizinisi, Law & More futhi ihlinzeka ngayo yonke imisebenzi ongayilindela kwinkampani yezomthetho. Singumlingani wakho ohlukanisayo lapho kudingekile, sikunikeza izeluleko zomthetho futhi sikulambele wena lapho kudingeka.
URuby van Kersbergen
Abameli bethu benhlangano bakulungele
Ukhona yini ukuhlangana izivumelwano zabo? Singathumela izikhumbuzi futhi silinganise
Uphenyo oluhle lwe-efanele lunikeza isiqiniseko. Thina ukukusiza
Ungathanda ukwenza imithetho ehlukile bamasheya yakho ngaphezu izihloko zakho yabangane? Sibuze ngosizo lwezomthetho
"Law & More uyathinteka
nezinkinga zeklayenti lakhe ”
Ukuxhaswa okwenziwe ngomthetho okwenziwe ngomsila
Ubusomabhizinisi imvamisa buyindaba yesikhathi. Ngakho-ke kubalulekile ukubala ukwesekwa okusemthethweni okusheshayo. Ochwepheshe at Law & More nikeza ukwesekwa okusemthethweni ngummeli webhizinisi, ngenkathi ngasikhathi sinolwazi olukhethekile nokwazi kommeli. Ungacela ihhovisi lethu ukuthi lincedisane nethimba lakho labameli bezindlu, singakwazi ukukwenzela imisebenzi njengommeli ongapheli wezindlu noma ungathinta isisebenzi sika Law & More ukuthola iphrojekthi, isikhala esivulekile noma ukungabikho kwesikhathi eside kommeli wendlu. Lokhu kunika amandla Law & More ukunikela ukusekelwa kwezomthetho okwenzelwe lokho.
Asigcini nje ngokukhomba amacala ngesikhathi esifanele, kodwa futhi sinikeza zonke izivumelwano ezidingekayo. Lokhu kuzovimbela izinkinga ngokuzayo futhi kunciphise nethuba lezinqubo ezinde zibe zincane. Uma inqubo ethile ingenakugwenywa, khona-ke sinolwazi lwangaphakathi lokukusiza. Njengosomabhizinisi, ungagxila ngokuphelele ebhizinisini. Ngokubambisana nawe, sihlaziya lesi simo bese sinquma amaqhinga. Ingabe unentshisekelo ezinhlelweni zommeli wenkampani? Bese uthinta abameli bebhizinisi ku- Law & More.